Walaac laga muujiyey sida loo maareeyey baaritaanka xagga da’da ah ee dhalaanka keli socodka ah | Somaliska
Laanta socdaalka ee dalka Iswiidhan ayaa qiimeeyn iyo u kuura gelid ku sameeysay 144 kiis oo la xirriira dhalaanka keli socodka ee da’doodu qiimeyn lugu sameeynayo. Natiijaddii qiimeyntaas ayaa noqotay mid aan lugu qacin sida loo maareeyey.
Dhalaanka magangalyo doonka ah ee baaritaanka xagga da’da lugu sameeynayey ayaa 60% (lixdan boqolkiiba) waxaa ay muujiyeen kuwo aan soo saarin natiijo wax ku ool ah.
“Kuma qanacsanin sideey wax u socdaan, waxaana haatan wadaa dar dar gelin aan kor ugu qaadeeyno tayada wax lugu baarayo” ayey tiri Veronika Lindstrand Kant, oo ah ku simaha madaxa howlgelinta laanta socdaalka oo qoraal ay soo dirtay ku sheegtay sidaas. Dhalaanka kor loo qaaday da’dooda saddex meel labbo ka mid ah 145-tii kiis ee baaritaanka lugu sameeyey. Waxaana ay natiijada u muuqatay mid wax ka badashay go’aano si qaldan loo qaatay.
“Waxaa dhici karto inaan xukunay shaqsiyaad da’d yar haddii aan heeysan laheyn xog badan ” ayey tiri Veronika Lindstrand Kant oo u warameeysay idaacada raadiyo Iswiidhan barnaamijkeeda Kalibar la yiraahdo. Laanta socdaalka ayaa tan iyo sanadkii hore waxaa ay ku howlaneyd qiimeeynta xagga da’da ah oo ay ku sameeysneeysay dhalaan keli socod ah, Kuwaas oo ay qaarkood dalka laga musaafuriyey markii loo diiday dal ku jooga. Talaabadan ayaa keentay in sadex dhalinyaro ah ay iska qaadeen nafta ka dib markii loo diiday sharciga luguna amray ineey ka baxaan dalka.